သားရဲပလ္လင်ပေါ်၌ အမျက်တော်ဖန်ပုလင်း - ယေရှုခရစ်၏ ဗျာဒိတ်တော်
ေမ ၂၀၊​ ၂၀၂၂ ဧပြီလ 20 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ဖန်ပုလင်းများသည် ကြောင်သူတော်များနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားသတင်းကို ဟောပြောခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ပဉ္စမကောင်းကင်တမန်သည် သူ၏ဖန်ပုလင်းကို သားရဲ၏ပလ္လင်ပေါ်မှာ သွန်းလောင်း၍၊ သူ၏နိုင်ငံသည် မှောင်မိုက်နှင့်ပြည့်၏။ သူတို့သည် နာကျင်ခြင်းအတွက် လျှာကိုကိုက်၍ နာကျင်ကိုက်ခဲသော အနာများကြောင့် ကောင်းကင်ဘုံ၏ ဘုရားသခင်ကို ကဲ့ရဲ့ရှုံ့ချကြသဖြင့်၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၆:၁၀-၁၁
ဤသားရဲ၏ပလ္လင်သည် ဝိညာဏ Pergamos ၌ တည်၏။စာတန်သည် ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းရန် လုံလောက်သောအခွင့်အာဏာကို ထူထောင်နိုင်သောအခါ၊ (ဟုတ်ပါတယ်၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ အမှောင်ခေတ်မှာ ပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်။)
“သင်ပြုသောအမှုတို့ကို ငါသိ၏။ စာတန်၏ထိုင်ခုံ အကြောင်းမူကား၊ သင်သည် ငါ၏နာမကို စွဲစွဲမြဲမြဲကိုင်စွဲလျက်၊ စာတန်ကျိန်းဝပ်ရာ သင်တို့တွင် အသေခံခဲ့သော အန္တိပသည် ငါ၏သစ္စာရှိအာဇာနည်ဖြစ်ခဲ့သော ထိုကာလ၌ပင်၊ ငါ့ယုံကြည်ခြင်းကို မငြင်းပယ်ဘဲ၊ ~ ဗျာဒိတ် ၂:၁၃
စာတန်၏ အခွင့်အာဏာသည် ဘုရားသခင်ကို နာခံခြင်း၏ ကောင်းချီးများထက် လူသားများ၏ ချီးမွမ်းခြင်းကို သာ၍နှစ်သက်သော ဆိုးညစ်သော စိတ်နှလုံးထဲတွင် ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် လူကို သခင်ယေရှု၏ နေရာကို ယူပြီး မှန်သည် မှားသည် ကို စီရင် ခွင့် ပေး သည် ။ ၎င်းကို ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်း “သားရဲ” မှလည်း ကိုယ်စားပြုသည်။
ထို့ကြောင့် ပဉ္စမပုလင်းတွင်၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ဖြင့် တရားစီရင်ခြင်းခံရသော အခွင့်အာဏာသည် သားရဲနှင့်ဆိုင်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း 13 တွင် သားရဲသည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏လူတို့ကို စော်ကားရန် မြေကြီးဆိုင်ရာ စွမ်းအားရှိသော ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြသည်။.
“ဘုရားသခင်ကို လွန်ကျူး၍ နာမတော်ကို၎င်း၊ တဲတော်နှင့် ကောင်းကင်ဘုံ၌နေသောသူတို့ကို၎င်း ကဲ့ရဲ့ခြင်းငှါ၎င်း နှုတ်ကိုဖွင့်လေ၏။ သန့်ရှင်းသူတို့ကို စစ်တိုက်၍ အောင်နိုင်စေခြင်းငှာ၊ အမျိုးအနွယ်၊ ဘာသာစကား၊ လူမျိုးအပေါင်းကို အုပ်စိုးသော အခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၃:၆-၇
ဤသားရဲသည် “လူများ၊ အစုအဝေးများ၊ လူမျိုးများနှင့် ဘာသာစကားများ” ကိုကိုယ်စားပြုသည့် သင်္ကေတဖြစ်သော ပင်လယ်မှထွက်လာသည် (ဗျာဒိတ် ၁၇:၁၅ ကိုကြည့်ပါ)။ ပင်လယ်သည် ဗျာဒိတ် ၁၆:၃ တွင် တရားစီရင်ခြင်းအမျက်တော်သွန်းလောင်းသောဖန်ပုလင်းရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မကောင်းသောပင်လယ်မှထွက်လာသော အရာသည် ဆိုးယုတ်ခြင်းသာဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်စီရင်ခြင်းကိုလည်း လိုအပ်ပါသည်။
အစောပိုင်းရေးသားချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ဤအမျက်ဒေါသတရားဟောခြင်းပုလင်းများသည် လူတို့ကို ၎င်းတို့၏အမှောင်နှင့် အပြစ်ရှိသောလှည့်ဖြားမှုမှ နှိုးဆော်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ပုလင်းများသည် ပစ်မှတ်တစ်ခုအပေါ်၌ အပြီးသတ်စီရင်ခြင်း၏ ပြီးမြောက်မှုကို ကိုယ်စားပြုသည်- ပုလင်းပေါ်တွင် သွန်းလောင်းခဲ့သည့်အရာ။ ထို့ကြောင့် သွန်းပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သွန်းလောင်းရာတွင် ကောင်းသောအရာ တစ်စုံတစ်ရာ မကျန်တော့ကြောင်း သံသယ မရှိပါ။ သို့သော် သတိပြုမိသည်မှာ ဖန်ပုလင်းတစ်ခုစီသည် ဆက်စပ်တံပိုးက စတင်ပြောဆိုနေပြီဖြစ်သော တရားစီရင်ခြင်းအား ပြီးမြောက်စေခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည်၊ ၎င်းမှာ ပဉ္စမတံပိုးဖြစ်သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ပဉ္စမမြောက် ဧဝံဂေလိတံပိုးမှုတွင်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၏ “သော့” ပါရှိသော ဓမ္မအမှုတစ်ခုသည် ဤသော့ကိုဖွင့်ရန်၊ စာတန်၏လှည့်စားမှုများ၊ အောက်ခြေမရှိသောတွင်းများမှ၊. သူတို့သည် မိမိတို့၏ အခွင့်အာဏာကို ထူထောင်ရန်အတွက်လည်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ယူဆောင်သွားကြသည်။ အပြစ်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့် လူတို့ကို နာကျင်စေခြင်းငှာ နှုတ်ကပတ်တော်၏ အလုံအလောက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြင့် အပြစ်အားလုံးကို လုံးလုံးကျော်လွှားနိုင်ရန် ဘုရားသခင်ထံ မည်ကဲ့သို့ ဝတ်ပြုရမည်ကို လူတို့မသိစေဘဲ၊ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ သူတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် တရားစီရင်ရန် အခွင့်အာဏာကို ရယူထားပြီး၊ လူများကို ၎င်းတို့၏အာဏာနှင့် အခွင့်အာဏာအောက်သို့ ပို့ဆောင်ရန်၊ ဘုရားသခင်၏ အခွင့်အာဏာကို ရယူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ပရိုတက်စတင့်ခေတ်တွင် ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ချ်ကဲ့သို့ သားရဲသဘာဝရှိရန် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထိုင်ခုံကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရာတွင်၊ ဤဓမ္မအမှုသည် လူတို့အပေါ် ဝိညာဉ်ရေးနာကျင်မှုကို သက်ရောက်စေကြောင်း ပဉ္စမတံပိုးက ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိပေးသည်။
ထို့ကြောင့် နောက်ဆုံးအမျက်ဒေါသ၏ ဤပဉ္စမပုလင်းတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ဤမှားယွင်းသောဓမ္မအမှုတွင် အခြားသူတို့ကို ပြုမိခဲ့သောကြောင့် ၎င်းတို့၏ဝိညာဉ်အနာများကို ခံစားစေပါသည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် စိုက်ထားတဲ့အတိုင်း ရိတ်သိမ်းနေကြတယ်။ ထို့ကြောင့် လူများစွာအတွက် ဤစီရင်ချက်သည် အလွန်နာကျင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏ဘာသာတရားသည် အမှောင်ထုနှင့် ပြည့်နှက်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် ယင်းကိုလက်မလွှတ်ချင်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် ဤစီရင်ချက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆန့်ကျင်ဆဲဖြစ်ပြီး၊ ထိုသို့ပြုခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို (မရိုသေခြင်း) ရှုတ်ချကြသည်။
၅ ကြိမ်မြောက် တံပိုးမှုတ်သံသတိပေးချက်မှာ ဘုရားသခင်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့လူတွေကို နာကျင်စေခဲ့တဲ့ သူတို့ရဲ့လျှာတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့လျှာတွေကို ကိုက်ခဲခဲ့ကြတယ်။ ယခုတော့ သူတို့၏လျှာသည် မှောင်မိုက်မဲမဲကြီး ဖြစ်နေပေပြီ။ သူတို့၏သတင်းစကားသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို ဖော်ပြနေသည်- အမှောင်။ သူတို့ပြောသော ပါးစပ်ကို အလွန်နာကျင်စေသည်။
ဒါဆို ဒီဖန်ပုလင်းက မင်းကို နာကျင်စေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အနာပေါက်စေသလား။ ဘုရားသခင်ကို ထပ်ပြီး မစော်ကားနဲ့။ “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” ကဲ့သို့ သားရဲ၏ အရေခြုံမှုကို နောင်တရပြီး အပြစ်နှင့် ဘုရားကျောင်းကစားခြင်း နှစ်ခုစလုံးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ယေရှုခရစ်နှင့် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံမှုအပြည့်နှင့် သန့်ရှင်းမှုအတွက် ရပ်တည်ရန် သင့်တွင် အခွင့်အာဏာရှိနိုင်သည်။
မှတ်ချက်- ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာအပြည့်အစုံတွင် ပဉ္စမပုလင်းမက်ဆေ့ချ်သည် မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင် ပြထားသည်။ ဤ “ဘုရားသခင့်အမျက်တော်ပုလင်းများ” မက်ဆေ့ခ်ျများသည် ကြောင်သူတော်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ဖျက်ဆီးရန် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြီးမြောက်စေသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ မြင့်မားသောအဆင့်အမြင်ကို ကောင်းစွာနားလည်ရန်၊ သင်သည် ““လမ်းပြမြေပုံဗျာ”
အမျိုးအစားများ ဖန်ပုလင်း ၇ လုံး, သားရဲ, မှားယွင်းသောစီရင်ချက်များ, မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များ, ဗျာဒိတ်ကျမ်း _၁၆ တဂ် အမှောင်, လှည့်စားခြင်း။, အရေခြုံ, တရားစီရင်ခြင်း။, စာတန်၏ထိုင်ခုံ, အမျက်ဒေါသ ပို့စ်ညွှန်း
ဥဖရတ်မြစ်ကို ခြောက်သွေ့စေသဖြင့် အရှေ့တိုင်း၏ဘုရင်များ ဝင်လာနိုင်သည်။
နေပေါ်၌ အမျက်တော် ဖန်ပုလင်း - ဓမ္မသစ် တရားစီရင်ချက်